Zvinobudirira nepachinko ruzivo inounganidzwa kushandisa P-WORLD
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvinobudirira nepachinko ruzivo inounganidzwa kushandisa P-WORLD
Nani kuti nepachinko ndechokuti, ndinofunga tiri vazhinji vari kushandisa peji-nyika. A vakasununguka nzvimbo, saka munhu anogona kuonekwa nyore, ndiko kuunganidza ruzivo vava chinokosha nzvimbo.
Munguva S.-nyika, kuti chokwadi ndiye ruzivo pamusoro nepachinko yaiitirwa mashoko uye achangobuda yokutevedzera kunhivi nyika, indasitiri ruzivo uye Xintai uye kubviswa tafura kuera, nezvimwewo, achauya siyana mashoko re. Naizvozvo peji-nyika iri chinozivikanwa nzvimbo kuti uyewo achaongorora kuti nepachinko indasitiri vakuru, nepachinko parlors kuti vakanyorwa pamusoro nzvimbo iyi, ndinofunga kuti pane anenge 80%.
uyewo munyika muMharidzo, ichi nepachinko mashoko paIndaneti, tinoda kutarisa sei nounyanzvi kushandisa. peji-nyika, kunyange pasina kuenda nepachinko yokumusoro, zvitoro zviitiko uye Xintai mashoko kana, kugadzwa wokuenzanisira, nezvimwewo, inogona unganidza nyore zvose mashoko yakatangwa kubva nepachinko parlors.
Kunyanya, zvinzvimbo kwavatapwa tafura uye Xintai, nekuti mashoko asina kuwanikwa zvimwe, Xintai, akadai zvinobatsira macheki anokwanisawo kuunganidza kufanoziva ruzivo. Uyezve, indasitiri ruzivo zvakare mashoko ose S.-nyika yakasiyana.
apo ??mugadziri chii yokutevedzera kombiyuta, akadai kana kubudikidza bvunzo, nekunhonga mashoko ambotaurwa, unogona zvakare akafanotaura nguva okusuma Xintai. Uye muenzaniso mashoko ari S.-nyika, kusvikira kushandiswa tafura kubva ichangobva womuenzaniso, zvinokwanisika kutsvaka chero womuenzaniso, sezvo zviri chokuita kuti mugadziri wacho Website, unogona unganidza nyore uwane womuenzaniso ruzivo.
kwakadaro, zviri zvakanyanya kuona kuti kushandiswa mashoko pane imwe nzvimbo iri indasitiri, unogona kuunganidza mamwe mashoko proactively.
uye, zvakanaka kushandisa nzvimbo iyi, ndinofunga kuti ndiyo nguva chaizvoizvo kuenda kunotamba. Kana ukaenda varove kubenzi, unofanira kuva muchitoro wokutanga kusarudza. Panguva iyoyo, ndicho unobatsira chaizvo nepachinko yokumusoro mashoko munyika. Kamwe iwe vakasarudza nharaunda umo Ndichaenda
, tanga kutarira Place vanoda ruzivo, zviri ndakagadza womuenzaniso uye zviitiko. By kuongorora installation womuenzaniso, chii kombiyuta yemashoko zvikwangwani yokutevedzera, vangava akaisa simba chero Specs vanotarira kubudikidza Matasupekku, uyewo, kubva installation womuenzaniso nokurondedzerwa, hapana Kwakandiwanisa nepachinko kunyange chitoro, unogona nepachinko yokumusoro rekuregererwa mwero akafanotaurwa kuti zvimwe pamwero.
uye chiitiko mashoko acharamba kuongorora uye kupisa chiitiko womuenzaniso uye zviitiko. Chokwadi chipi mwero chipikiri kugadziridzwa, ndiko kuti kuitika mhando, handizivi kuenda nepachinko yokumusoro zvirokwazvo asi, nokuenda vatore zvishoma mashoko, muenzaniso akasarudzwa inova mvere, kurasikirwa nguva haufaniri kuva.
kutendeuka reshiyo By anogona kufanoona, maererano ravo sei kutamba kwete chiitiko mhando, ndanzwawo vachakwanisa uyewo kuti vakasarudza pamberi muenzaniso. Nenzira iyi, hapana tsvina uye kushandisa mashoko ari peji-nyika, ungada kuti kuedza kutumira nepachinko upenyu.